> Resource > Talooyin > Share Flash Muqaal Online - Muqaal u Blogger
Weli wareeriya sida si kor loogu qaado wax soo saarka ama adeeg? Maanta, website-yada warbaahinta bulshada ay ku sii noqday dhufto weyn bulsho xirfadlayaal ganacsiga! An profile page xarrago ama blog la online flash slideshow hore kaa caawin doona inaad haleelaan badan oo jallo ka tan oo soo booqda, soona jiidan doonta sida maskax shakhsiyaad meel ku xigta.
Tutorial Tani waxay inta badan kugu hanuuniyo sidii ay u geliyaan flash thumbnail sawir gallery in web iyo waxa Cudarada in Google Blogger post , si aad blog dheeraad ah oo soo jiidasho leh talaabooyin fudud oo keliya. Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe loo isticmaali doono. Waxaa Download si maxkamad loo saaro lacag la'aan ah.
1 Samee Flash Photo Muqaal
Daah- kii sameeyey flash slideshow oo waxaad ka samaysaa slideshow flash sawir, markaas jiidi jeedi sawiro (iyo videos) si ay u software flash slideshow samaynta.
2 Dooro aad jeceshahay 2D ama 3D slideshow template
Dooro 2D jecel ama 3D slideshow template ka badan. Waxaa jira xidhmo marto slideshow cajiib ah oo aad ka dooran kartaa si aad u cabsi badan kuu gaar ah slideshow flash. Faahfaahinta arrimo slideshow flash .
3 Save iyo Upload Flash Photo Muqaal in Web
Si aad ah flash slideshow online, aad waxaa la siiyaa qaar ka mid ah halkan ku soo saarka fursadaha la heli karo, riix batoonka dhex naadiya , markaas:
Riix badhanka Save the si loo badbaadiyo slideshow flash aad ee HTML, XML, Jabbuuti iyo in ka badan. Tusaale ahaan, haddii aad shaqo badbaadin sida Jabbuuti oo files, aad dhakhso u gali kartaa in YouTube markaas nuqul oo paste code socosho on your blog ah; ama waxa kale oo aad u badbaadin karaa sida file html iyo waxaa lagu siin doonaa qaar ka mid ah code html oo aad si toos ah nuqul karo iyo paste on your blog.
Waxaad sidoo kale riixi kartaa FTP in ay geliyaan ah file Flash Jabbuuti oo si web hosting kasta. Haddii aadan haysan ciidankiisii ​​oo internetka ah, waxaad gali kartaa file flash si aad u Google Sites, si ay u helaan cinwaanka URL oo ka mid ah file Flash Jabbuuti ka.
Talooyin badan oo ku saabsan uploading slideshow photo flash online
Upload gallery web sawir inay Google Goobaha
Http://sites.google.com/ Open, saxiixo in la xisaabtaada Gmail. Hubi ikhtiyaarka "Anigu waxaan oggolahay inaan erayada", riix badhanka hoose, iyo login "Waxaan diyaar u ah in la abuuro boggaga aan ahay".
Riix badhanka "File Dooro" hoose, ka dibna caleenta iyo dooro file Flash Jabbuuti oo aad disk adag ee degaanka, waxaa geliyaan.
Haddaba, slideshow photo flash uploaded la ee "Lifaaq" ku qoran doonaa.
Hadda idinku waxaad uploaded faylka Jabbuuti Flash in Google Page, markaas waa in aad hesho cinwaanka URL ee flash ka slideshow online ah oo la soco. Si aad u hesho cinwaanka URL flash Jabbuuti, aad furi karaa flash ka slideshow uploaded oo nuqul ka cinwaankaaga URL ee web browser cinwaanka bar ah. Cinwaanka link waa eg: http://sites.google.com/site/wondersharefamily/Home/index.swf.
Embed Flash Photo Muqaal in Blogger
Tallaabada ugu dambaysaa waxay tahay in la Cudarada slideshow flash si aad post Blogger. Fur editor blogger aad, beddelaan si ay "Edit HTML" mode, ka dibna ku dar code soo socda mid ka mid ah qeybaha boostada aad blogger.
< object classid = " clsid : D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 "codebase ="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,45, 0 "width =" 150 "height =" 150 ">
< param name = "movie" Qiimaha = " http://sites.google.com/site/wondersharefamily/Home/index.swf "/>
< param name = " oo tayo leh "Qiimaha =" sare "/>
< param name = "menu" Qiimaha = "been ah" />
< socosho SRC = " http://sites.google.com/site/wondersharefamily/Home/index.swf "tayada = "sare" pluginspage = "http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" nooca = "codsiga / x- shockwave -flash "width =" 150 "height =" 150 "> </ socosho>
</ diiddo >
Fadlan bedeli URL Cas ee xeerka si adiga kuu gaar ah URL oo dhigay dhinacyada kuu gaar ah file Flash Jabbuuti. Xaaladdan oo kale, cinwaankaaga URL waa http://sites.google.com/site/wondersharefamily/Home/index.swf. Kadib markii aan bad, View Post ee Blogger si loo hubiyo in slideshow flash u Blogger si fiican u shaqeeyo. Haddii aan , ku noqo aad post blogger in xaalkaa code HTML ah.
Sidoo kale waxaad nuqul ka karaa iyo paste code kor ku xusan si aad website, blogs kale ama meel kasta oo aad u dheer sida ay taageerto codings HTML aad rabto. Markaas dib ugu codes cas adiga kuu gaar ah size URL iyo slideshow, waana laydiin yeeli doonaa.